Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ထုတ်လုပ်ခြင်း, ရောင်းချခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်တဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ်။ ကျနော်တို့တွင်တည်ရှိပြီး, Taiwan နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးခွင့်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအားဆက်ကပ်အပ်နှံကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများအမြဲသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဆွေးနွေးအပြည့်အဝဖောက်သည်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်ရရှိနိုင်တယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုအမျိုးအစားအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - JH-D8-1/JH-D8-2
ITEM:ဖား ဦး ချို
DES:ရာဘာမီးသီးနှင့်အတူ PP နီယွန်ကိုယ်ထည်,
အဘို့:၂၂.၂&၂၅.လက်ကိုင်ဘား ၄ ခု
ထုပ်ပိုးသည်:1 pc/အိတ်,10 PCs/box 100 PCs/ctn
ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:8 KGS CUFT:၁.5
ချစ်စရာဒီဇိုင်း-စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအသွင်အပြင်သည်ဆိုင်ကယ် ဦး ချိုကိုထူးခြားသောအနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်စေသည်,ဒိုးနတ်ဒီဇိုင်းပါသောသေးငယ်ပြီးလုံးဝန်းသောရော်ဘာဘောလုံးကို၎င်း၌ချစ်စရာကောင်းပြီးစတိုင်ကျသောအရာတစ်ခုထည့်ပါ.ကလေး၏စက်ဘီး ဦး ချိုကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်’s စက်ဘီး.လူကြီးများနှင့်ကလေးများသည်လက်တွေ့ကျပြီးလှပသော ဦး ချိုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်.
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်-ဝက်အူလှည့်ပြင်ဆင်ပါ,ဝက်အူတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးစက်ဘီးလက်ကိုင်ဘားတွင်ပလတ်စတစ်ကလစ်ကိုထည့်ပြီး၎င်းကိုထည့်ပါ.စက်ဘီး၏ ဦး ချိုအရွယ်အစားသည် universal စက်ဘီးနှင့်လိုက်ဖက်သည်,၎င်းကိုစက်ဘီးမှအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်.
လုံခြုံပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ-ရာဘာဖားကို ဦး ချိုပေါ်ညှစ်ချခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောဟိန်းသံဖြင့်လမ်းရှင်းပါ,မမှားနိုင်သောအသံကမင်းကိုလူတိုင်းသိစေနိုင်တယ်’လာနေတယ်.
ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှု-ဤဂန္ထဝင် retro စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်တောင်တက်စက်ဘီးအတွက်အသုံး ၀ င်သည်,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ကလေး’s ဆိုင်ကယ်ခေါက်စက်ဘီးစကူတာ,စသည်တို့.,စက်ဘီးခေါင်းလောင်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်သည်,သို့မဟုတ်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများကိုလက်တွေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပါ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/donut-bike-bell.html
ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ဒိုးနပ်စက်ဘီးဘဲလ် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan
အရွယ်အစား:၇၅ မီလီမီတာDES:အလွိုင်းထိပ်,ပလပ်စတစ်အခြေခံထုပ်ပိုးသည်:1pc/သတျတော,100 PCs/ctn cuft:2 N.ဒဗလျူ:4 Kg ဂျီ.ဒဗလျူ:5 KGS FOR၂၂.၂ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၂၅.၄ မီလီမီတာသို့မဟုတ် ၃၁.၈ မီလီမီတာလက်ကိုင်ဘား လေရဟတ်လေးတစ်ခုနှင့်အံ့သြဖွယ်အဖုံးတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောအကြည့်-လက်ရာမြောက်ပြီးစတိုင်ကျသောဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်-စံဝက်အူလှည့်ဖြင့်စက်ဘီးအများစုကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပါ.စံအရွယ်အစားလက်ကိုင်အများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်. လျှောက်လွှာများ:ခေါင်းလောင်းကိုလမ်းစက်ဘီးအတွက်အသုံးချနိုင်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီးစသဖြင့်၎င်းကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်,မိသားစု
အလွိုင်းထိပ်,ပလပ်စတစ်အခြေခံ.ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10pc/box 200pc/ctn.,2.၂ ပေ.ဆး.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ် G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ် အထင်ကြီးတယ်&ချစ်စရာပုံစံ–ကလေးများစိတ်ဝင်စားသောစက်ဘီးခေါင်းလောင်းဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကလေးများအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ကောင်းတဲ့မျက်နှာ-ပလတ်စတစ်ခေါင်းလောင်းကိုကြည့်ရှုရာတွင်သံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုရေစိုခံဆေးဖြင့်အုပ်ထားပြီး၎င်းသည်ပိုမိုတာရှည်ခံလှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-အလွိုင်း,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၃၉ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၄ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ် ငရုတ်ကောင်းပုံစံ–ချစ်စရာကောင်းတဲ့&ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစက်ဘီးအပိုတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ITEM:ဟမ်ဘာဂါဘဲလ်DES:ထိပ်တန်း&အခြေခံ:ပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၆၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PC/အကွက် ၂၀၀ PCS/CTN.၂.၇ ပေ.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ်.ဆ.ဒဗလျူ.:၁၄ ကီလိုဂရမ်. ဟမ်ဘာဂါပုံစံ–အထင်ကြီးတယ်&ဖန်တီးမှုဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်-စံဝက်အူလှည့်ဖြင့်စက်ဘီးအများစုကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပါ.စံအရွယ်အစားလက်ကိုင်အများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်. လျှောက်လွှာများ:ခေါင်းလောင်းကိုလမ်းစက်ဘီးအတွက်အသုံးချနိုင်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီးစသဖြင့်၎င်းကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်,မိသားစု
ပစ္စည်း:သံမဏိထိပ်နှင့် UCP အခြေစိုက်စခန်းအရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10 pc/box 100 PCs/ctn.,၀ ယ်သည်.8 cuftဆး.ဒဗလျူ.:၉ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၁ ကီလိုဂရမ် ပုံစံ-ထူးခြားသောတောက်ပသောဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် သာယာလှပသောကြေးဝါသံနှင့်အတူ အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်-စံဝက်အူလှည့်ဖြင့်စက်ဘီးအများစုကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပါ.စံအရွယ်အစားလက်ကိုင်အများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည်. လျှောက်လွှာများ:ခေါင်းလောင်းကိုလမ်းစက်ဘီးအတွက်အသုံးချနိုင်သည်,တောင်တက်စက်ဘီး,မြို့စက်ဘီး,အားကစားစက်ဘီး,ခရူဇာစက်ဘီးစသဖြင့်၎င်းကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်,မိသားစု